မှတ်တိုင်သစ်...: ပရင့်အောက်ပြီး ကပ်ထားဖို့Mr. Creator ဆီက လာတဲ့ ပုံ
ပရင့်အောက်ပြီး ကပ်ထားဖို့Mr. Creator ဆီက လာတဲ့ ပုံ
Monday, November 15, 2010 3:57 AM | Posted by Unknown
email နဲ့ဖြန့် နေကြတဲ့ Mr. Creator ရဲ့ လက်သံပြောင်ချက်။
သူက ပေါတာကြီးကို ဓာတ်ကျနေတာ ကြာပြီ။
မကြာခဏ အစွမ်းပြ ဖန်တီးလေ့ ရှိတယ်။
ဒီရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဖန်တီးမှုက ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဂုဏ်ပြု ဖြန့်ဝေတာ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေကိုလည်း ကွက်တိ ထင်ဟပ်နေတယ်။
ပုံကို နောက်တခါ ထပ်အကြည့်မှာ မထင်မရှား ရေးထားတဲ့ဟာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါက သိပ်မသင့်တော်လို့ထင်ပါရဲ့ဖန်တီးသူက ကိုယ်တိုင် ဆင်ဆာ ဖြတ်ထားတယ် အနည်းငယ်။
ဒီပုံကို ပုံကြီး ချဲ့ပြီး မြန်မာပြည်က ရုံးတိုင်းမှာ ကပ်ထားရင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ အသက်ရှည်မယ်။
ရယ်သောသူ အသက်ရှည်၏လို့ ဆိုစကား ရှိတယ် မဟုတ်လား။
အမှန်တကယ် ရယ်ရတဲ့ ပုံတွေ Mr. Creator ဖန်တီးနိုင်ပါစေ။
Credit to Irrawaddy: http://www.irrawaddyblog.com/2010/11/mr-creator.html
0 Comments to ပရင့်အောက်ပြီး ကပ်ထားဖို့Mr. Creator ဆီက လာတဲ့ ပုံ